အရေးကြောင်းသက်သာအောင် မျက်ဝန်းပတ်လည်မှာ ဘိုတော့စ်ထိုးတာက မျက်စိကို ထိခိုက်စေနိုင်ပါသလား …
—၊ ပါမောက္ခဦးတင်ဝင်း (မျက်စိအထူးကု ဆရာဝန်ကြီး)မှ ဖြေကြားပေးပါသည်။ ၊— Q. မျက်ခုံးနှစ်ခုကြား၊ မျက်ဝန်းထောင့်မှာ အရေးကြောင်းတွေရှိလို့ ဘိုတော့စ်ထိုးချင်ပါတယ်။ အဲဒါ မျက်စိထိခိုက်နိုင်ပါသလား သိချင်ပါတယ်။ NyiLatt(FB) A. ဘိုတော့စ် (Botox) ဆိုတာ Botulinum Toxin ဖြစ်ပါတယ်။...
မျက်ကပ်မှန်တပ်သူအတွက် သီးသန့်မျက်စဉ်းဆေး ခတ်သင့်သလား
—၊ ပါမောက္ခဦးတင်ဝင်း (မျက်စိအထူးကု ဆရာဝန်ကြီး) မှ ဖြေကြားပေးပါသည်။ ၊— Q. မျက်ကပ်မှန်တပ်နေသူတွေအနေနဲ့ မျက်ကပ်မှန်တပ်သူတွေ သုံးရတဲ့ သီးသန့်မျက်စဉ်းဆေးခတ်ဖို့ လိုအပ်ပါသလား။ NN (FB) A. ရပါတယ်။ ဒီဆေးရည်က မျက်ကပ်မှန်တပ်သူတွေအတွက် သီးသန့်ထုတ်ထားတာပါပဲ။ တကယ်တမ်းပြောရရင်တော့ မျက်ရည်တု...
Q. ညီမ လက်အနောက်ဘက် ကျော်ဘက်က အရမ်းနာနေလို့။ ကျောဘက်ပါနာတာ ၇ လရှိပါပြီ။ ဆေးခန်းပြလည်း မသက်သာလို့။ SL(FB) A. ကျောပြင်နာတယ်၊ ဆရာဝန်လည်း ပြပြီးပြီဆိုတော့ အဆုတ်ကိုစစ်ဆေးပြီးပြီလို့ ထင်ပါတယ်။ ဖြစ်နိုင်ခြေကတော့ ကျောပြင်က ကြွက်သားနဲ့ အာရုံကြောတွေကြောင့်နာတာ ဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။...
—၊ ဒေါက်တာမိုးအောင်ကျော်နိုင် (အထွေထွေရောဂါအထူးကု ဆရာဝန်ကြီး)မှ ဖြေကြားပေးပါသည်။ ၊— Q. အသည်းရဲ့ လုပ်ငန်းဆောင်တာတွေကို သိချင်ပါတယ်။ အသည်းရဲ့ လုပ်ငန်းဆောင်တာ မထိခိုက်အောင် ဘယ်လိုနေထိုင် စားသောက်သင့်ပါသလဲ။ Maylay(FB) A. အသည်းကတော့ သည်းခြေရည်ကို စစ်ထုတ်ပြီး ခန္ဓာကိုယ်က စားသောက်လိုက်တဲ့...
ဆီးချိုရှိသူက ဘယ်လိုအားဆေး သောက်သင့်ပါသလဲ
—–၊ ဒေါက်တာမိုးအောင်ကျော်နိုင် (အထွေထွေရောဂါအထူးကု ဆရာဝန်ကြီး) ၊—– Q. ကျွန်မ ဆီးချိုရောဂါရှိပါတယ်။ အားဆေးသောက်ချင်လို့ပါ။ ဘယ်လိုအားဆေးကို ရွေးချယ်သောက်သင့်ပါသလဲ။ Daw lay(FB) A. အားဆေးဆိုတဲ့နေရာမှာ မာလ်တီဗီတာမင်လို့ ခေါ်ပါတယ်။ မာလ်တီဗီတာမင်ရဲ့ သဘောက ချို့တဲ့တဲ့သူတွေအတွက် အကျိုးရှိပါတယ်။ ဒါတွေက...